OnePlus6မှာ ဘာဖြစ်လို့ Wireless Charging မပါတာလဲ?
22 May 2018 . 10:48 AM
OnePlus6စမတ်ဖုန်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းက တရားဝင်မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီးတော့ Specifications တွေအရရော Design ပိုင်းအရရော လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံးသော စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလို့ ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း Design ပိုင်းကို Glass Body ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် Wireless Charging မပါဝင်လာတဲ့အပေါ်ကိုတော့ ဝေဖန်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် OnePlus ကနေ ဘာဖြစ်လို့ OnePlus6စမတ်ဖုန်းမှာ Wireless Charging မထည့်သွင်းပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
OnePlus ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ သူတို့က Wireless Charging Feature ကို ထည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မခံစားရတဲ့အတွက် မထည့်သွင်းပေးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ Wireless Charging ကို ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင် သီးခြား Wireless Charger ကိုပါ ထပ်မံရောင်းချနေရမယ့်အပြင် လက်ရှိ Fast Charging Support ပြုလုပ်တဲ့ Wireless Charger တွေတောင်မှ အားသွင်းတဲ့အမြန်နှုန်းက OnePlus ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Fast Charging နဲ့ ယှဉ်ရင် မတရားနှေးကွေးနေသေးတယ်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး အခုလိုမျိုး OnePlus6မှာ Glass Body ကို အသုံးပြုလာတာက ဖုန်း Signal တွေကို ပိုပြီး ဖမ်းယူမှုအားကောင်းအောင် အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ OnePlus6ဖုန်းက လက်ရှိအချိန်မှာ ပထမဆုံး Gigabit Download Speed ကို ရရှိနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Wireless Charging စနစ်က အမြန်နှုန်းအရတော့ နှေးတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် OnePlus အနေနဲ့ OnePlus 6T စမတ်ဖုန်းမှာတော့ ထည့်သွင်းလာနိုင်မလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
OnePlus6စမတျဖုနျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျတုနျးက တရားဝငျမိတျဆကျသှားခဲ့ပွီးတော့ Specifications တှအေရရော Design ပိုငျးအရရော လကျရှိမှာ အကောငျးဆုံးသော စမတျဖုနျးတဈခုလို့ ပွောရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး Design ပိုငျးကို Glass Body ပွောငျးလဲအသုံးပွုခဲ့ပမေယျ့ Wireless Charging မပါဝငျလာတဲ့အပျေါကိုတော့ ဝဖေနျခံနရေတာဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ OnePlus ကနေ ဘာဖွဈလို့ OnePlus6စမတျဖုနျးမှာ Wireless Charging မထညျ့သှငျးပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကို ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
OnePlus ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရတော့ သူတို့က Wireless Charging Feature ကို ထညျ့သှငျးဖို့ လိုအပျတယျလို့ မခံစားရတဲ့အတှကျ မထညျ့သှငျးပေးခဲ့တာလို့ သိရပါတယျ။ Wireless Charging ကို ထညျ့သှငျးမယျဆိုရငျ သီးခွား Wireless Charger ကိုပါ ထပျမံရောငျးခနြရေမယျ့အပွငျ လကျရှိ Fast Charging Support ပွုလုပျတဲ့ Wireless Charger တှတေောငျမှ အားသှငျးတဲ့အမွနျနှုနျးက OnePlus ရဲ့ ကိုယျပိုငျ Fast Charging နဲ့ ယှဉျရငျ မတရားနှေးကှေးနသေေးတယျလို့လညျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
နောကျပွီး အခုလိုမြိုး OnePlus6မှာ Glass Body ကို အသုံးပွုလာတာက ဖုနျး Signal တှကေို ပိုပွီး ဖမျးယူမှုအားကောငျးအောငျ အသုံးပွုခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ OnePlus6ဖုနျးက လကျရှိအခြိနျမှာ ပထမဆုံး Gigabit Download Speed ကို ရရှိနိုငျတဲ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးလညျး ဖွဈလာပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ Wireless Charging စနဈက အမွနျနှုနျးအရတော့ နှေးတယျဆိုပမေယျ့လညျး အလှနျအသုံးဝငျတဲ့ Feature တဈခုဖွဈတဲ့အတှကျ OnePlus အနနေဲ့ OnePlus 6T စမတျဖုနျးမှာတော့ ထညျ့သှငျးလာနိုငျမလားဆိုတာကို စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။